Nepali Christian Bible Study Resources - विज्ञान, बाइबल र मुक्तिदाता
» अध्ययन मालाहरू » विज्ञान, बाइबल र मुक्तिदाता » ५-अन्तरालको सिद्धान्त(ख)
“मैले पथ्वीका जगहरू बसाल्दा तिमी कहाँ थियौ?...
४)	पृथ्वीलाई नष्ट-भ्रष्ट पारेको शैतानको पापले होइन, तर मानिसको पापले हो। पृथ्वी श्रापित भएको लुसिफरको पतनले होइन, तर आदमको पतनले हो (उत्पत्ति ३:१५-१९)। निम्न समयरेखालाई विचार गर्नुहोस्:
सुरुमा, उत्पत्ति १:१ मा ब्रह्माण्डको सुरु भन्दा पनि निकै अगाडि, परमेश्वरले तेस्रो स्वर्ग (“सर्वोच्च आकाश”—नहेम्याह ९:६) र कुनै मानिसले गन्न सक्ने भन्दा पनि ज्यादा यसमा भएका सबै स्वर्गदूतहरू सृष्टि गर्नुभयो (प्रकाश ५:११)। सृष्टि गरिएका स्वर्गदुतहरू मध्ये एकजनाको नाम लुसिफर थियो, त्यो करुब जसले परमेश्वरको सिंहासनलाई ढाकेर राख्थ्यो (इजकिएल २८:१२-१६)। एकदिन आफ्नो सुन्दरताको कारणले यस स्वर्गदुतको हृदय घमण्डले उचालियो (इजकिएल २८:१७) र एउटा प्राणी मात्र भए तापनि उसले आफ्नो बारेमा अति धेरै कुराहरू सोच्यो, र अनुपम सृष्टिकर्ता परमेश्वरको बारेमा बेठीक तरिकाले बिचर गर्न थाल्यो। परमेश्वरको मात्र स्वामित्व रहेको कुराहरू उसले चाह गर्न थाल्यो। घमण्डमा फुलिएर (१ तिमोथी ३:६), उसले आफैंलाई परमेश्वरको स्थानमा राखेर पाप गर्यो (यशैया १४:१३-१४का “म ... चढ्नेछु, उचाल्नेछु” इत्यादि शब्दहरूलाई ध्यान दिनुहोस्)। पहिलो पटक, सृष्टिको थोकले सृष्टिकर्ताको बिरुद्धमा पाप गरेको थियो। यो बाहिरी पाप थिएन, यो भित्री पाप थियो (“किनकि तैंले आफ्नो हृदयमा भनेको छस्”- यशैया १४:१३), तर आफ्नो सृष्टिका थोकहरूको हृदयमा देख्नुहुने परमेश्वरले तुरुन्तै पापको इन्साफ गर्नैपर्छ। धर्मी परमेश्वरले सिद्ध इन्साफको अभ्यास गर्दै उसलाई आगोको झीलभित्र फ्याँक्ने निर्णय गर्नुभएको छ (मत्ती २५:४१)। अरू स्वर्गदुतहरू छक्क परे। यस्तो कुरा उनीहरूले कहिल्यै देखेका थिएनन्। त्योभन्दा अगाडी परमेश्वरले कहिल्यै पनि कसैको इन्साफ गर्नुभएको थिएन। उहाँले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था नै सृजना भएको थिएन। परमेश्वरको सिद्ध इन्साफ पहिलो चोटि देखिएको थियो।
जब सबै स्वर्गदुतहरूले उत्साहित भएर हेरिरहेका थिए, परमेश्वरले सृष्टिको महान् कार्य सुरू गर्नुभयो। उहाँका मुखका शब्दहरूले (भजनसङ्ग्रह ३३:६५-९) आकाशहरू र पृथ्वी सृष्टि गरिए (उत्पत्ती १;१)। परमेश्वरले पृथ्वीको जग हाल्नुहुँदा पवित्र दुतहरूले रमाहट गरे (अय्यूब ३८:४,७)। पृथ्वी (जोचाहिँ सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरूभन्दा अगाडि सृष्टि गरिएको थियो) उहाँको दृश्यकाव्यको निम्ति रङ्गमञ्च बन्यो। उत्पत्ती १ अध्यायमा पथ्वी केन्द्र बिषय बन्दछ (उत्पत्ती १:२-“अनि पृथ्वी...”)। अरबौं खरबौं ताराहरू त पछि बिचार गरिएका थोकहरू झैं गरी उल्लेख गरिएको छ (उत्पत्ती १:१६)। परमेश्वरले आफ्नो सिद्ध गुणहरूको प्रस्तुतिकरणको निम्ति उहाँले गर्न लाग्नुभएको कार्यको मूख्य केन्द्र पृथ्वी ग्रह बन्दछ। अन्त्यमा, मुक्तिदाता स्वर्गको महिमाबाट बाहिर आउनुभए पछि र मानवको रूपमा आफैंलाई नम्र तुल्याउनु भएपछि (फिलिप्पी २:६-८), शृङ्खला अन्तिम चरणमा आइपुग्छ। पछि कलवरीको क्रूसमा जानुभएर उहाँले आफैंलाई अझै नम्र तुल्याउनुहुन्छ। यहीँ नै परमेश्वरले पापलाई कति घृणा गर्नुहुन्छ भनी देखाउनुभयो। यहीँ परमेश्वरले कसरी पापको इन्साफ गर्नुपर्छ भनी देखाउनुभयो। र अझैपनि यहीँ परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिप्रति, र झन् मानिसहरू प्रति उहाँ कति प्रेमिलो र अनुग्रही हुनुहुन्छ भनी देखाउनुभयो। त्यसैले क्रूसमा नै शैतानले हार खायो र परमेश्वरको गुण पुष्टि गरियो। शैतानको दोषहरू एकैचोटि र सदाका निम्ति झूटा प्रमाणित भए!
उत्पत्ति एक अध्यायमा पढ्दा, उक्त अध्यायले सृष्टिको कुरा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ कि पुनर्सृष्टिको? के परमेश्वरले सम्पूर्ण थोकहरू पुन: सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कि परमेश्वरले सम्पूर्ण थोकहरू पहिलो पल्ट सृष्टि गर्दैहुनुहुन्थ्यो? उत्पत्ति २:३ ले बताउँदछ कि “उहाँ (परमेश्वर) ले आफ्नो सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो, जो परमेश्वरले __________ गरेर ______________ थियो।” यो पदले यस्तो बताउँदैन, “उहाँले आफ्नो सबै कामबाट विश्राम लिनुभयो, जो उहाँले पुनर्सृष्टि गरेर पुन: बनाउनुभएको थियो।” फेरी पनि, प्रस्थान २०:११ ले यस्तो बताउँदैन “किनकि छ दिनमा परमेश्वरले आकाश, पृथ्वी ... पुनर्सृष्टि गर्नुभयो”। कहिलेकसो हामीले भूल गर्दछौं र र कुनै कुराहरू पुन: दोहोर्याएर गरिनुपर्छ! तर परमेश्वरले गर्नुभएको सृष्टिकार्य सिद्ध थियो र यो केवल एकपटक मात्र गरिनुपरेको थियो! भजनसंग्रह १८:३० हेर्नुहोस्! परमेश्वरले भूल गर्नुहुँदैन।
वियोजक खण्डवाक्य (Disjunctive clause) को अर्को उदाहरण उत्पत्ति २:११-१४ मा पाइन्छ। यी पदहरूमा चारओटा नदीहरूको नाम दिइएको छ: “पहिलोचाहिँको नाम... दोस्रोचाहिँको नाम... तेस्रो नदीको नाम” इत्यादी। ११ पदमा पहिलो नदीको नाम (“पीशोन”) दिइएको छ र हामी हवीला देशको बारेमा पनि बताइएको छ जहाँ सुन पाइन्छ। त्यसपछि १२ पदमा त्यहाँ क्षणिक विराम छ। दोस्रो नदीको नाम दिइनुको सट्टा (१३ पदसम्म पनि त्यो नाम उल्लेख गरिएको छैन), परमेश्वरले त्यस देशको सुन कस्तो थियो भनी बताउन रोकिनुहुन्छ (अनि त्यस देशको सुन _____________ हुन्छ”)।
« अन्तरालको सिद्धान्त
आकाश, पृथ्वी र मानिसको उमेर कति? »